ကံအညံ့တွေကြုံနေလား? လာဘ်ပွင့်ချင်လား? အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး လက်ထက်က ယတြာကောင်း – Myanmar Magazine
ကံအညံ့တွေကြုံနေလား? လာဘ်ပွင့်ချင်လား? အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး လက်ထက်က ယတြာကောင်း
November 27, 2018 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး အမည်ပေးသော စိန္တကျော်သူဦးသြ၏ “အကြံကုန် ဂဠုန် ဆားချက်ကိန်း” ယတြာ
လူတိုင်း အခက်အခဲကြုံလာသောအခါ..အညံ့နှင့်ကြုံသောအခါ…လာဘ်လာဘပိတ်ဆို့နေသောအခါများ တွင်..ဤ ယတြာကို ပြုလုပ်ပါက လက်တွေ့အကျိုးရှိပေသည်။ မည်သူမဆို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်၍ အကျိုးကျေးဇူးများစေသောနည်းဖြစ်၍ အခက်အခဲများ..အညံ့များ…လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ ပြေပျောက် ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗဟုသုတ ရစေရန်နှင့် အဆင်ပြေကြစေရန် ရည်သန်၍ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများသည် အင်္ဂါနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္ဂနွေ ထောင့်တွင် ကံကော်ညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
တနလာင်္နေ့ မွေးသူများသည် ဗုဒ္ဓဟူးနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္လာ ထောင့်တွင် ဇီး(၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများသည် ကြာသပတေးနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ အင်္ဂါထောင့်တွင် ရွက်လှညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများသည် သောကြာနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်တွင် ပျဉ်းမညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးညနေ (ရာဟု)တွင် မွေးဖွားသူများ
ဗုဒ္ဓဟူးညနေ မွေးသူများသည် သောကြာနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ ရာဟုထောင့်တွင် မေမြို့ပန်း (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများသည် စနေနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ ကြာသပတေးထောင့်တွင် သီဟိုဠ်ညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
သောကြာနေ့ မွေးသူများသည် တနင်္ဂနွေနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ သောကြာထောင့်တွင် ဒန်းညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ.. လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
စနေနေ့ မွေးသူများသည် တနင်္လာနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ စနေထောင့်တွင် အုန်းညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။
ယတြာအစွမ်းထက်ခြင်း..မထက်ခြင်းသည်….မိမိ..သီလ.. သမာဓိ ..နှင့် ယတြာအပေါ် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်မှုရှိခြင်းတို့အပေါ် မှီခို ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယုံကြည်စွာ ပြုလုပ်ပါ။ကပ်လှူပါ၊ဆုတောင်းပါ။
ထို့နောက် ငါးပါးသီလ အား ကာလတခု အထိ ဆောက်တည်စောင့်ထိန်း ပါ။
၃၁ ဘုံ သားတို့နှင့် မြင်အပ်မမြင်အပ် ပုဂ္ဂိုလ် တို့အား မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ။
အားလုံးဘေးဘယာကင်းဝေးပြီး..အညံ့များပြေပျောက်၍ လာဘ်လာဘ များပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
← သားသားလေးကို တစ်ယောက်တစ်လှည့် ထိန်းနေကြတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဗီဒီယို
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်အား ပုဇွန်တောင်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ် →
တောသား မြို့တက် တိုင်တွေပတ် (ဟာသ)
April 12, 2019 myanmarmagazine Comments Off on တောသား မြို့တက် တိုင်တွေပတ် (ဟာသ)
March 19, 2019 myanmarmagazine Comments Off on ဘာကို တန်ဖိုးထားရမလဲ
တစ်နေ့တာ လန်းဆန်းတက်ကြွနေစေဖို့ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ မနက်ခင်းအလေ့အထများ
February 4, 2019 myanmarmagazine Comments Off on တစ်နေ့တာ လန်းဆန်းတက်ကြွနေစေဖို့ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ မနက်ခင်းအလေ့အထများ